आईतबार, मंसिर १२, २०७८ Sarangi Radio Network
गुल्मीमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया स्थगित
पोखरामा २२१ औं नियमित गजल वाचन
अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई एससिआईको नि: शुल्क स्वास्थ्य सामाग्री
महिनावारी-विभेद सामान्तवादको उपज - मन्त्री अधिकारी
दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट भेटिएपछि बेलायतले बन्द गर्याे ६ देशसँगको हवाई उडान
आँउदाे विश्व कपमा पोर्चुगल र इटलीमध्य एक देशले मात्रै विश्व कप खेल्न पाउने
रुसको एक कोइला खानीमा आगलागी हुँदा ५२ जनाको निसास्सिएर ज्यान गयाे
आज र भोलि पनि देशभर नै हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना,देशका धेरै ठाउँको वायु प्रदूषण बढ्याे
बालुवा खानीमा पुरिँदा जुम्लामा दुई महिलाको ज्यान गयो
काठमाडौं । दुर्गा सप्तशती अनुसार देवताहरुले जब आरधना गरे तब माता दुर्गा एक नारीको रुपमा, अम्बिकाको रुपमा एक चट्टान माथि प्रकट हुनुभयो । त्यहाँ महिषासुरका एक दूत आएर भन्छन्, 'तिमी निकै रुपवती छौ । हामीसँग हिड र हाम्रो महाराज महिषासुरको पटरानी बन ।'
माता भगवती भन्नुहुन्छ, 'मेरो त एक प्रतिज्ञा छ - 'योम: जायते संग्रामे' जो मलाई संग्राममा हराउछ म उसैको पत्नी बन्न सक्छु । तब मा भगवतीसँग महिषासुरको युद्ध भयो र कालीमठमा महिषासुरको वध भयो ।
सुमेधा मुनिसँग राजा सुरथ र समाधि नामका वैश्यले जब अभिष्ट सिद्धिको मार्ग सोधे तब सुमेधा मुनि भन्छन्, 'संसारको सर्वसत्ता छिन् मा भगवती तिमीहरु उहाँको पुजा गर ।'
दुवै नदि किनारमा बसेर भगवतीको पुजा गर्न थाले । उनिहरुले त सप्तशतीको पाठ पनि गरेनन् । उनिहरु तीन बर्षसम्म भगवतीलाई आफ्नो रगतले परोलक्षित बलि दिइरहे। जब भगवती प्रसन्न हुनुभयो तब भगवतीले भन्नुभयो, 'म तिमीहरुसँग प्रसन्न छुँ, माग तिमीहरु के चाहन्छौ ।'
तव राजा सुरथले भने, 'माता यदि तपाई मेरो भक्तिबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मलाई यस्तो राज्य दिनुहोस जुन कहिले पनि नष्ट नहोस तथा मेरो गुमेको राज्य पनि मलाई पुन प्राप्त होस ।'
भगवतीले भन्नुभयो, 'जाउ तिमी आफ्नो सेना जम्मा गर, सेना जम्मा गरेपछि जुन राज्य तिमीले गुमाएका छौ त्यो तिमीले पुन प्राप्त गर्नेछौ ।'
माता भगवतीले, त्यस आदिशक्तिले त्यसपछि समाधिसँग सोध्नुभयो, ' छोरा तिमी के चाहन्छौ ?'
समाधि वैश्य भन्छन्, 'हे माता मलाई संसारको कुनै पनि वस्तु चाहिदैन । मलाई राजपाट पनि चाहिदैन । मेरा परिवारले पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि मलाई तिलांजली दिए, यसकारण मलाई परिवार पनि चाहिदैन । मलाई यो अनुभव भएको छ कि यो नाता सम्बन्ध पनि सबै क्षणभंगुर छन्, कोहि कसैको साथ जादैन । मलाई संसारको वैभव पनि चाहिदैन किनभने यो पनि परिवर्तन हुने चीज हो, यसमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । यसकारण हे माता मलाई त यस्तो ज्ञान दिनुहोस कि मेरो अज्ञानान्धकार समाप्त होस । हे मा मलाई तपाईको जुन परारुप छ, त्यसको वास्तविक रुपको दर्शन गराइदिनुहोस, मलाई आत्मज्ञान प्रदान गर्नुहोस ।'
तब माताले भन्नुभयो,' तथास्तु तिमीलाई यस्तो नै ज्ञान प्राप्त हुनेछ र ज्ञान भएपछि तिमी मेरो वास्तविक रुपलाई जान्नेछौ ।'
आईतबार, कात्तिक २, २०७७, २२:२३:००
श्रीमतीबाट १० वर्ष ब'ला-त्कृत एक पुरु'षको कारुणीक कथा
मानिस भँगेरा जस्तै 'कामुक' भयो भने...(फोटो फिचर) एक अर्काको जोडीसँग यौन सम्पर्क गर्न रुचाउने भँगेराले दैनिक तीन सय पटक भन्दा बढी यौन सम्पर्क गर्ने गर्दछ ।
शुक्रबार, असार २६, २०७७ सारङ्गी न्युज
जडिबुटिका ज्ञाता निकोलस कुलपिपरले भङ्गेराको गिदीले यौन उत्तेजना बढाउने उल्लेख गरेका छन् पुरा पढ्नुहोस्
अल्पविरामको लघुकथा सङ्ग्रह अनुभूतिका रङ्गहरू सार्वजनिक ४ घण्टा पहिले
अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई एससिआईको नि: शुल्क स्वास्थ्य सामाग्री सारङ्गी न्युज
महिनावारी-विभेद सामान्तवादको उपज - मन्त्री अधिकारी सारङ्गी न्युज
आज र भोलि पनि देशभर नै हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना,देशका धेरै ठाउँको वायु प्रदूषण बढ्याे सारङ्गी न्युज
गुल्मीमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया स्थगित ८ घण्टा पहिले
नेकपा माओवादी केन्द्रले आज पालिका तहको अधिवेशन गर्ने १८ घण्टा पहिले
एमालेमा नेतृत्वको लागि सर्वसम्मतिको प्रयास,अब एमाले ३०१ केन्द्रीय सदस्य रहने १८ घण्टा पहिले
वर्तमान Covid-19 सङ्क्रमणमा जीवन रक्षाको लागि Medical Oxygen - दीपक सुवेदी बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८
कोभिडले बालबालिकामा पुर्‍याएको मनोवैज्ञानिक असरबारे कहिले सोच्ने ? - मदन घिमिरे बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८
कोरोनाः रोग एक, प्रभाव अनेक – भरतमणि भट्टराई मंगलबार, वैशाख २८, २०७८